Ny Shinoa bilaogera manoloana ny lalàna vaovao mifehy ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2018 6:25 GMT
Ny bilaogera Shinoa manoloana ny lalàna vaovao mifehy ny Aterineto
Ny Minisiteran'ny Farimbon'asam-pampahalalam-baovao ao Shina dia namoaka fitsipika vaovao antsoina hoe “Fitsipika mifehy ny Fitantanana ny Tolotra Fampahalalam-baovao amin'ny Aterineto” (antonta-taratasy amin'ny Shinoa Orizinaly sy ny teny Anglisy tsy ofisialy), izay mikendry ny hanara-maso sy hifehezana kokoa ny Aterineto Shinoa, anisan'izany ny Tranonkalam-baovao, ny Sehatra Famoaham-baovao (BBS) ary ny Bilaogy. Manana ny heviny momba ity fitsipika ity ireo bilaogera Shinoa .
Nanoratra lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ” Kintana Mena eo Ambonin'i Shina ” ilay mpitati-baovao an-gazety Flypig, ary nanameloka ity fanivanana ity. Nampifandray ny lahatsorany tamin'ny fitateram-baovao lehibe vahiny iray izy ary nitodika tany amin'ny lahatsoratra iray hafa izay miantso ny governemanta mba hijery ny fisandratan'ny Rakipeo.
Nitanisa ny lahatsoratra iray i Mindmeters mba hanehoana ny hatezerany manoloana ny sivana. Nosoratan'ilay mpanoratra tantara malaza Shinoa Wang Xiaobo izany izay efa maty 8 taona lasa izay (1997). Ao anatin'ilay tantara izy nanoratra tamim-panesoana mivantambantana : noho ny fanakanana ny zava-drehetra ao amin'ny aterineto ary mila manana asa fivelomana mampiasa vatana ny mpanoratra rehetra satria tsy misy toerana ho azy ireo hivelomana amin'ny alalan'ny fanoratana fotsiny.
Nandefa ny hetsika momba sivana sasany i PriestLiu. Nampahatsiahy ny olona izy fa ny tranokalam-baovao amin'ny teny Anglisy dia tsy azo antoka intsony noho ireo tranokalam-baovao Shinoa namany satria manatona azy ireo Rindrin'Afo Lehibe. Naneso ny mpanao lalàna izy fa nivoaka mialoha ny Lalànan'ny Fampahalalam-baovao ny “Fitsipika mifehy ny Tolotra Famoaham-baovao amin'ny Aterineto “.
Nanao fanoherana tao amin'ny bilaoginy i Ding Yong ary nanambara fa tsy handefa bilaogy mandritra ny iray volana izy. Nolazainy fa noho ny fanakanana vonjimaika ny Zaobao.com , tranokalam-baovao iray ao Singapaoro (Efa niverina tamin'ny laoniny) no nahatonga ny fanapahan-keviny. Nampiasa ny ohabolana malaza “Sahobakaka ao anaty Rano Mafana” izy ary nandrisika ireo namany mba tsy hizatra ny sivana amin'ny aterineto.
Amin'ny ankapobeny dia tsy misy zava-baovao ao amin'ny fitsipika satria efa nampiharina ny ankamaroan'ireo fepetra noraisina toy ny fanoratana anarana ny tranonkala sy ny fanaraha-maso ny votoaty ao amin'ny Famoaham-baovao; namintina izany tamin'ny antsipiriany bebe kokoa fotsiny izy io. Tsy niresaka momba ny bilaogy manokana izy io saingy mety hisy fiantraikany tokoa amin'ny zavatra izay azon'ny bilaogera soratana. Tsy mbola nisy fiantraikany tamin'izany rahateo ihany koa ny Fivorian'ny Bilaogera Shinoa.